डा. केसीलाई लिन गएको हेलिकोप्टर रित्तै फर्कियो – Fewa Times
डा. केसीलाई लिन गएको हेलिकोप्टर रित्तै फर्कियो
प्रकाशित मिति: November 12, 2019 8:11 am
डडेल्धुरा – डडेल्धुरा अस्पतालभित्रको भित्री कक्षमा प्रा. डा. गोविन्द केसी छटपटाइरहेका थिए । त्यसैबेला कपिलवस्तु तौलिहवाकी शोभा अर्याल डा।केसीलाई भेटेर फर्किरहेकी थिईन् । उनले भनिन् ‘उहाँका माग जायज छन् र, न्यायिक पनि छन् । ’
अस्पतालको सानो कोठामा डा. केसी अनसन बसेका छन् । उनलाई अहिलेसम्म आठ सय ८५ जनाले भेट गरेका छन् । आठौं दिनमा उनी धेरै गलेका देखिए ।
यस्तै सोमबार बेलुकि भेट्न गएकी तुफान डाँडाँका केशवा ओझाले भनीन्, ‘डा। केसीले हाम्रै ठाउँमा ठुलो अस्पताल हुनुपर्छ भनेर अनसन बस्नुभएको छ । तर, नेताहरुले सुन्दैनन्, उहाँको माग राम्रो लागेको छ ।’
डा केसी १८ कार्तिकदेखि अनसन बसिरहेका छन् । उनलाई भेट्न दार्चुलादेखि कपिलबस्तुसम्मका नागरीक आउने गरेका छन् । डा केसी चिकीत्सा शिक्षाको सुधारको माग गर्दै डडेलधुरा अस्पतालमा अनसनरत छन् । उनले मेडिकल माफियालाई कारबाही गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने मागलाई मूख्य रुपमा अघि सारेका छन् ।
डा. केसीले माग पुरा नहुँदा सम्म आफू काठमाडौं नजाने बताएका छन् । डा।केसी बोल्न अप्ठ्यारो मानेपछि उनको उपचारमा संलग्न डा. तोषीमा कार्किले भनीन्, ‘उहाँले यहिं आइसीयू कक्ष हुनुपर्छ । यहाँ आइसीयू नराख्ने अनि मलाई काठमाडौं जानुस भन्न मिल्छ, म जादैंन भनेर भन्नुभएको छ ।’ डा. केसीले आईसीयू डडेलधुरामा नआउँदा सम्म काठमाडौं नफर्किने अडान राखे ।
यसैविच, चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग लिएर डडेलधुरामा आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई लिन गएको हेलिकोप्टर रित्तै फर्किएको छ । डा. केसीले माग पूरा नगरी नजाने अडान राखेपछि हेलिकोप्टर रित्तै फर्किएको हो ।
अनसनका कारण डा केसीको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि सरकारले उनलाई काठमाडौं ल्याउन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पठाएको थियो । तर, सहमति विपरीत डा. केसीलाई लैजान नदिने भन्दै स्थानीयले बिहानदेखि नै डडेलधुरामा प्रदर्शन गरेका थिए । डा. केसीलाई भेट्न डोटी, बैतडी, दार्चुला, कपिलवस्तु, सल्यान लगायतका जिल्लाबाट आएका थिए । स्थानियहरुले पनि डा।केसीको मागलाई सम्बोधन गरे नेपाली जनताको हित हुने बताए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
क्वारेटिनमा ६ सय २४ वटा यौन हिंसा
अर्को साइतमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण